मधेश लाइभ - परिवर्तनको सम्वाहक
प्रदेश सरकार र ग्लोबल आइएमई बैंकबीच सम्झौता भएसँगै छोरी शिक्षा बीच पुनः सुचारु भएको प्रमुख फुयालले बताए ।
नदीको धार गाउँतिर सोझिँदा बेलका नगरपालिकाका ४ वडाका एक दर्जनभन्दा बढी बस्ती उच्च जोखिममा परेको हो ।
जनकपुरधाम, १९ असार । कोरोना महामारीका कारण स्थगित हुन पुगेको मधेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजना छोरी शिक्षा बीमा पुनः सुचारु भएको छ । आज (आइतवार)बाट पुनः छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम सुचारु भएको शिक्षा विकास निर्देशनालय मधेश प्रदेशका शिक्षा निर्देशक चुडामणी फुयालले जानकारी दिए । उनका अनुसार [...]
विकासमा सर्वोच्चले बन्चरो प्रहार गरेछ, लज्जित छुः डा.भट्टराई
-राजेश विद्रोही मेरो मोबाइलमा एकाविहानै एकजना वडा अध्यक्षको फोन आयो । र, उसले भन्यो, म त साँच्चिकै अपहरणमा परेको छु । जीवनमा पहिलो पटक यस्तो भयो । यो कस्तो खालको राजनीति हो? जित्न जति सजिलो छ । बाँच्न उति गार्हो रहेछ । पाँच वर्ष कसरी बाँच्ने होला? आफ्नै पार्टीले यसरी अपहरण गरेर क्याम्पिंग गरेको प्रति उनी असन्तुष्ट थिए । उसको [...]
राजविराज, २१ वैशाख । अघिल्लो कार्यकालमा बाँकी रहेका कामलाई पुर्णता दिनका लागि आफु दोस्रो पटक पनि उम्मेदवार बनेको सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिकामा अध्यक्षका प्रत्यासी दयानन्द गोइतले बताएका छन् । मधेशलाइभसितको कुराकानीमा जनता समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार रहेका उनले यस्तो बताएका हुन् । भौगोलिक हिसाबले जिल्लाको सुदुर [...]
'आरक्षण'ले पुर्‍याइदिएको डाक्टर सपना
अफगानिस्तान भूकम्पः ९२० जनाको मृत्यु, ६ सयभन्दा बढी घाइते
जनकपुरधाम। अफगानिस्तानमा गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण ९२० जनाको मृत्यु भएको छ । बीबीसीले जनाएअनुसार हालसम्म [...]
भारतमा चरम गरिबी सन् २०१९ मा १२ दशमलव ३ प्रतिशत बिन्दुले कम रहेको र २०११ [...]
बीबीसी । भारतको बिहारको सासाराम जिल्लाको अमियावार गाउँमा पर्ने अर्राह नहरमा बनाइएको ६० फुट लामो [...]
पिनाक रञ्जन चक्रवर्ती सार्क निष्क्रिय भएको अवस्थामा बिमस्टेक बङ्गालको खाडी क्षेत्र र भारतको "एक्ट ईस्ट" [...]
५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल असारको तेस्रो सातासम्म आइपुग्नेः मन्त्री यादव
उखु किसानलाई अनुदान दिन ८१ करोड रुपैयाँ छुट्याइयो
कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ५ अर्ब ९० करोड विनियोजन
व्यवसायिक पशुपालक किसानलाई अनुदानमा च्याप कटर (भिडिओ)
वेमौसमको वर्षाः सप्तरीमा १५ हजार हेक्टरमा लगाइएको धानबाली तहसनहस
केएल राहुल र इशान किशनको आक्रमक ब्याटिङमा भारत विजयी
आजदेखि २७ जिल्लाका बालबालिकालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाइँदै
१२ वर्ष माथिका बालबालिकालाई आजबाट बुस्टर डोज लगाइने
देशभर ५२१ संक्रमित थपिदा झण्डै ४ हजार जना निको भए
मुलुकभर २ हजार ५२६ संक्रमित थपिए, ८ हजार ४२५ संक्रमणमुक्त
महोत्तरीमा माघ २४ गतेदेखि विद्यार्थीलाई मोडर्ना खोप लगाइने
जनकपुरधाम, ८ असार । हाल देशको प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ । अन्य प्रदेशका भू–भागमा स्थानीय वायु, पश्चिमी वायु तथा [...]
छात्रालाई कम्प्युटर उपलब्ध गराउन ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन
‘त्रास एक खौफ’ चलचित्रको छायांकन सुरु
भारतीय गायक कुमार सानु जनकपुर आउँदै
‘तू ताक हमरो दिस’ मैथिली म्यूजिक भिडिओ सार्वजनिक
अञ्जु र हरेरामको ‘मिलल अहाके साथ’ म्युजिक भिडिओ सार्वजनिक
‘मै हुँ ना’को सिक्वेलका लागि शाहरुखको निर्णय कुर्दै फराह खान